Semalt Inopa Mazano: Nzira Yokudzivirira Nayo WordPress Site Kubva Malware Zvimwe
WordPress inotarisana nekutengesa kwakawanda. Paavhareji vanhu vanomwe kubva pa10 vanochera mablogi vanogona kunge vane hutachiona hwehutachiona kana imwe nzira yekunyengedza. Saka iwe unogona sei kuchengetedza nzvimbo yako kubva kune spam, kubvongodza uye malware?
Max Bell, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotaura kuti pane zvakakosha, hapana musiyano wakawanda pakati pehutachiona hwehutachiona nekunyengedza. Kazhinji, vatengesi havazoshandisi nzvimbo yako kunze kwekunge kune zvimwe zvekupesana pakati pako nevanopomerwa ne-cyber kana une webhusaiti yakakurumbira. Mushure mezvose, chero hacker anogona kukwanisa DDOS uye mabhota kuti adzore nzvimbo yako mukati meminiti - revenda dominios com br.
Nenzira, zvikwata zvakagadziriswa pakugoverana zvakagadziriswa zvinonyanya kushungurudzwa nekurwisana, uye kune vashoma vema webmasters vanogona kuita chimwe chinhu kurwisana nekurwiswa kwakadaro. Parizvino, iwe unogona kunge wakagara pamucheto wechigaro chako uye uchitarisa nzvimbo yako yese maminetsi mashomanana kuti uone kuti haibvumiri kana kutapukirwa nemarware. Nyarara, nzvimbo yako haichawanzogadziriswa kana kutapukirwa kunze kwekuti iine humwe hutambudzi.
Zvino zvaunoziva vanoseka vanoona nzvimbo nehumwe udzvinyiriri, chii icho utera? Kutanga, vakawanda vanoblogiki uye webmasters vanoshandisa kugoverana pamwe chete pavanotanga. Kunyange zvazvo kugoverwa kugoverwa isangano risina mari, rinogona kukwezva spammers nevashambadzi.
Sezvo kune mazita emudzimai akawanda ekugoverwa kwekugovana achishandiswa seyoyo seyoyo sewebsite yako, pane nguva dzose inogona kuti vamwe vavo vari mavhisi. Izvi zvinoreva kuti vaviri vezviitiko izvi zvingangodaro vane zvinyorwa zvisina simba, kombiyuta yavo inogona kubatira Trojan kana kuti isina kuchengetedza nzvimbo yavo pakurwisana. Mumamiriro ezvinhu akadaro, muchengeti anongoda kuwanika sevha kuburikidza nenzvimbo inotambura, kuisa hutachiona hunokurumidza kupararira kune nzvimbo dzose uye mabloggi akachengetwa.
Kune rumwe rutivi, kana uri mutengesi kana blogger, kune mukana wekuti iwe unenge uri pane mamwe maforamu epaIndaneti. Zvamusingagoni kuziva ndezvokuti dzimwe nzvimbo idzi dzinotapukirwa asi hazvizivi kuti dziri kuparadzira malware kune vashandisi vavo kana kuti dzinovakwa navanhu vasingadi..
Kazhinji, vatengesi havasi kutsvaga nzvimbo yako kunze kwekuti iwe uine bhizimisi risina kukwana navo. Zvisinei, vashandi ve-cyber vanogara vachitsanangurira nzvimbo dzisina simba kuti dzisiyane. Kamwe pavanoziva mablogi ayo ari nyore, anotapura mavhavhari awo ane malware, ayo anopararira kune dzimwe nzvimbo dzakagadzirwa pane iyo server. Kusiyana .htaccess mod hack iyo inogona kubviswa nyore nyore nekugadzirisa mafaira chaiwo uye mafaira, malware yakaoma kubvisa sezvo inogona kuodza zvinyorwa zvako, zvinyorwa, uye database.
Saka, unogona sei kuchengetedza nzvimbo yako kubva kune malware?
Kana nzvimbo yako ine utachiona, pane zvingangodaro kuti password yako yakakanganisa. Kugadzirisa nyaya yacho, enda kuCanel yako uye shandura password yako. Kuti uone chokwadi chako chiri chakaoma kukanganisa, shandisa nhamba, zvinyorwa zvakakosha, zvinyorwa zvinyorwa uye mabhuku makuru.
Kana uchingoshandura password yako, funga kuchinja iwe password yako yekutumira zvakare. Kungofanana neCanel, shandisa zvinyorwa zvakaoma kufungidzira.
Kusimudza shanduro yako ndeimwe yenzira dzakakosha dzekudzivirira kurasikirwa kwezvakagadzirika apo nzvimbo inoshandiswa. Kuti uwane kubhadhara zvakakwana, funga kuwana Backup Buddy, purogiyona yakagadzirirwa yeBlogPress blogs.
Kuisa kuchengetedza plugins
Kunze kwekutsigira bhulogi yako, funga kuisa kuchengetedzwa kwemapulazi. Izvi zvinosanganisira:
WP Security Scanner inonzi chiedza chekuchengetedza scan rakagadzirwa neWeb Defender. Plugin inokubvumira kuti uchinje tafura ye dhesiki kune chimwe chinhu chakaoma kufungidzira.
Zviri nani WP Security
Plugin inotora WordPress kuchengetedza zvinhu uye maitiro uye inovapa sepodgin imwe chete. Zviri nani WP ine zvakawanda zvezvinhu zvinodiwa neva blogger uye inofanira kunge iri gomba rekutanga rekudana kune mablogi.